Maitiro ekuzvinyora nyore nyore kubva kuemail muemail | Ndinobva mac
Nezuro takataura nezve a dambudziko diki raungasangana naro neApple application yako Mac, nhasi tinotaura nezvayo imwe yemabhenefiti ekuve kana kuti pachinzvimbo kushandisa iyi yemuno application Apple kubata maemail account edu.
Icho chiri pamusoro kuzvinyoresa kana kubvisa kunyoreswa kweemail kubva kuaccount yedu nenzira yakapusa uye inokurumidza. Iyi sarudzo inowoneka natively mune yeMail application uye inoumbwa nekutumira yega email yekudzima kusevhisi yekunyorera.
Bvisa kana kuzvinyoresa kubva kune yekutumira tsamba
Sezvauri kuona mumufananidzo uri pamusoro, nzira iri nyore yekuzvinyora kubva pane tsamba yekutumira ndeyokutumira zvakananga email inokumbira kudzimwa kweichi kunyoreswa. Kuti uite izvi, zviri nyore sekutarisa kune iyo tsamba yatinogashira mune yeMessage application uye tinya kumusoro kurudyi uko kwazvinoti "Usazvinyora". Zvinogoneka kuti mune kumwe kunyorera hauzoone iyi sarudzo kuti uzvimise otomatiki saka uchafanirwa kunyora manyore kumutumira kuti amire kutumira maemail.
Iwindo repop-up rinobva raonekwa umo matinozobvunzwa yekusimbiswa kutumira email meseji nekusarega kunyora kubva kune ino tsamba yekutumira. Isu tinongofanirwa kugamuchira uye isu tinonzwa iwo chaiwo ruzha patinotumira email pamwe Mail.
Kubva panguva ino zvichienda mberi isu tichave tisipo zvachose pane tsamba yekutumira uye hatichazogashiri mamwe mameseji kubva kukambani ino. Sezvo iwe uchiwana zvinyorwa zvekunyorera, mamwe makambani anotora mukana uye anotumira ese marudzi emaemail kune vashandisi. Mukutaura vanogona kunge vari vashoma asi nekufamba kwenguva ivo vanowedzera uye izvi pakupedzisira zvinogona kuzadza bhokisi rako retsamba ne "spam". Hapana mubvunzo Tsamba inopa yakanakisa uye inokurumidza mhinduro yekuzvidzivirira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Maitiro ekuzvinyora nyore nyore kubva kuemail muemail
Adobe Audition ikozvino inotsigira Apple's M1 processor